खुसीको खबर: त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने भयो परिक्षा मिति तोक्यो कहिलेबाट हर्नुहोस् ! – नेपाली संगसार
खुसीको खबर: त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने भयो परिक्षा मिति तोक्यो कहिलेबाट हर्नुहोस् !
नेपाली संगसार calendar_today १० जेष्ठ २०७८, 2:06 am
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि लम्बिदै गएको स्नातक तहको परीक्षा अगाडी बढाउने भएको छ । कोरोना भाइरसको पहिलो लहरका कारण २०७७ सालबाट पछि धकेलिएको परीक्षा पुनः दोस्रो लहर चलेपछि रोकिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा फारम खुला गरेपनि बैशाख १५ गतेबाट सरकारले विभिन्न ठाँउमा निषेधाज्ञा गरेपछि स्थगित गरिएको थियो ।
विद्यार्थीहरुले परीक्षाबारे आवाज उठाएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीले परीक्षा फारम अनलाईनबाट पनि भर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै १० देखि २० जेठसम्म सम्बन्धित क्याम्पसबाट फारम भर्न सकिने जानकारी गराएको हो ।
‘कोभिड १९ को दोस्रो लहरको प्रकोपका कारण स्थगित गरिएकोमा २०७८ जेठ १० गतेदेखि २०७८ जेठ २० गतेसम्म क्याम्पसमा संकलन भएका आवेदन फारमहरु सम्बन्धित क्याम्पसबाट भराउने र आवेदन फारम छुट हुन गएका परीक्षार्थीहरुको आवेदन फारम मिति २०७८ जेठ १२ गतेदेखि २०७८ जेठ २० गतेसम्म अनलाइनबाट सम्बन्धित परीक्षार्थीहरु स्वयंले भर्न सक्नेछन्।
क्याम्पस र परीक्षार्थीहरुबाट भरिएका सम्पूर्ण फारमहरु सम्बन्धित क्याम्पसले रुजु गरी सोको रकम भुक्तानी गरी मिति २०७८ जेठ २३ गतेभित्र इन्ट्री गरिसक्नु पर्नेछ,’ सूचनामा उल्लेख छ।
यस्तै, त्रिविले पहिलो वर्षका विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षा साउन मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने जनाएको छ । त्यसका लागि छिट्टै सूचना प्रकाशित गरिने सूचनामा उल्लेख छ।